डरलाग्दा र रुवाउने चरित्रमा देखिने रहर छ : हरिवंश आचार्य [भिडियो वार्ता]
चैत ५, २०७४| प्रकाशित ०६:१५
हरिवंश आचार्य लामो समयपछि फिल्ममा फर्केका छन्। उनले अभिनय गरेको र लेखेको फिल्म ‘शत्रुगते’ रिलिजको संघारमा छ। ‘शत्रुगते’ मार्फत फिल्मका दर्शकमाझ आफ्नो बजार नाप्न आइपुगेका हुन्, आचार्य। उनलाई फिल्ममा काम गर्ने रहर मरेको छैन। त्यसैले नयाँ फिल्मकर्मीले आफूलाई अघिल्लो पुस्ता भनेको उनी सहँदैनन्। उनीसँग डिबी खड्काले गरेको कुराकानीः
फिल्म ‘शत्रुगते’ ट्रेलर त तपाईंकै पुरानो टेलिफिल्म ‘१५ गते’को भाइ जस्तो देखियो नि !
भाइ जस्तै होला। अलिअलि थिम पनि मिल्छ। अरु त पूरै फरक छ। त्यसको केही झल्को आओस् भनेरै गरिएको हो।
तपाईंबाट दर्शकले हरेकपल्ट नयाँ खुराकको अपेक्षा गर्छन्। उस्तै हुँदा त दर्शकमाथि धोका भयो नि?
थिम मात्रै मिलेको हो। कथा, संवाद र चरित्र सबै नयाँ छन्। सधैं र सम्पूर्ण रुपमा फरक पार्न गाह्रो पर्छ। त्यसैले थिम लिइएको हो।
लामो समयपछि फिल्ममा आउँदा तपाईंले चाहिँ फरक के पाउनुभयो?
फिल्म क्षेत्रका समाचार संकलन गर्ने सञ्चारमाध्यम निकै बढेछन्। रिलिज गर्ने तरिका फेरिएछ। प्रविधिको प्रयोगले निर्माणमा पनि फरकपन आएको छ। फिल्म हलको गुणस्तर पनि निकै बढेको छ।
सायद दर्शक रुची पनि फेरिएको छ ?
रुची त फेरिएको छैन। हामीले उहिले टेलिफिल्म बनाउने विषय अहिले फिल्ममा आइपुगेका छन्। हामीले ‘चिरञ्जीवी’, ‘वनपाले’ ‘१५ गते’, ‘लालपुर्जा’ जस्ता टेलिफिल्ममा उठाएका विषय अहिले फिल्मका लागि राम्रा विषय मानिन्छन्। त्यो बेला यिनलाई फिल्मका विषय मानिन्नथ्यो। फिल्म भएपछि हिरो, फाइट, गीत हुनुपथ्र्यो। हामीले उहिल्यै अपनाएको शैली अहिलेका फिल्मको ट्रेन्ड भएको छ। त्यसैले फिल्मको विषय फेरिएको हो। दर्शकको रुची फेरिएको देखिँदैन।
आफूले उठाएका विषय अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् भन्न खोज्नुभएको हो?
हामीले बनाएका टेलिफिल्मको ‘रिपिट भ्यालुएसन’ छ। अहिले पनि उत्तिकै रमाएर हेर्न सकिन्छ। फिल्म ‘तँ त सारै बिग्रिस नि बद्री’लाई फर्मुला फिल्ममा नढालेको भए हुने जस्तो लाग्छ अहिले।
आफूले निर्वाह गरेका भूमिकामध्ये कुन चाहिँ अहिले हेर्दा पनि मन पर्छ?
‘बलिदान’ फिल्ममा मैले गरेको भूमिका अरुभन्दा फरक छ। त्यसमा मैले हँसाएको छैन। त्यसपछि ‘कान्तिपुर’, ‘वनपाले’ र ‘लालपुर्जा’को भूमिका पनि मन पर्छन्। अहिले पनि कतिपयले तिनै चरित्र वरिपरि रहेर काम गरिरहेको देख्छु। मान्छेहरु त्यही हेरेर रमाइरहेका छन्।
तपाईंकोे ‘ड्रिम क्यारेक्टर’ चाहिँ के हो?
पूरै नकारात्मक भूमिका गर्न मन छ। त्यो एकदमै डरलाग्दो होस्। यति खराब र निर्दयी होस् कि मान्छे हेर्दै डराऊन्। अहिलेसम्म मलाई देख्नेबित्तिकै हाँस्नेहरु त्यो क्यारेक्टर देख्नेबित्तिकै रोऊन्।
हरिबहादुर सम्झिँदा पनि त मान्छेलाई त्यस्तै लाग्छ!
त्यो डरलाग्दो छैन। ऊ हास्य पात्र नै हो। नकारात्मक चरित्र त हो, तर थेत्तरो खालको। त्यस्तो होइन, साँच्चै डरलाग्दो देखिने चरित्र गर्ने चाहना छ।
‘शत्रुगते’मा तीन पुस्ताका कलाकार अटाउनुभएछ !
म पुरानो पुस्ताको चाहिँ होइन है। फिल्ममा म अहिलेकै पुस्ता हो। सबै कुरामा अपडेट भइराख्छु। प्रविधि, फेसन र नयाँ तरिकासँग अपडेट छु। काम गरिरहेको छु। जुन दिनसम्म काम गर्छु, त्यो दिनसम्म म अहिलेकै पुस्ता हुँ। त्यसैले मलाई पुरानो पुस्ता भन्न मिल्दैन।